IFixit yaphula i-iPhone 13 Pro ngokumangalisa | IPhone iindaba
UAlex Vicente | 28/09/2021 20:00 | iPhone 13
Njengonyaka ngamnye, IFixit isizisela "ukonakala" kwayo yesixhobo sokusizisela iinkcukacha ezipheleleyo malunga nokuba injani i-iPhone 13 Pro ngaphakathi kunye nezinto ezingaphakathi kulo nyaka. Kulo nyaka, babenako ukufumana isimanga kumacandelo e-ID yobuso kwaye baqaqambise iindaba ezinokuthi zichaphazele utshintsho kwesikrini.
Ngaphambi kokuphanda ukuba yintoni ngaphakathi kwi-iPhone entsha, IFixit yenze i-X-ray scan apho sinokujonga khona ibhetri emile njengo-LIsangqa semagnethi kaMagSafe, kunye neMifanekiso yokuZinzisa iimagnethi ecaleni kwesekethe. Enye yezona zinto zibalulekileyo kukuba i-iPhone 13 Pro ibonakala ngathi inentambo evela kwesinye seenzwa ngaphezulu, ngokwe-iFixit, enokudala iingxaki xa kusenziwa ukulungiswa kwesixhobo.
Ukuba siyaqhubeka ngemephu ebonakalayo, Injini yeTaptic ebekwe ngaphakathi kwaye iphethe ukulawula iHaptic Touch, kubonakala ngathi incinci ngobukhulu kunenye iminyaka. Nangona kunjalo, inkulu kunakwiminyaka edlulileyo kwaye inyuse ubunzima bayo ukusuka kwi-4,8 yeigram ubunzima bayo kwi-iPhone 12 Pro ukuya kwi-6,3 ukuba inobunzima namhlanje. Ukuqhubeka ngokuthelekisa ne-iPhone 12 Pro, imodeli entsha yePro ishenxisa isithethi sendlebe esibekwe kwiscreen ngokusihambisa kwakhona phakathi kwekhamera yangaphambili imodyuli ye-ID yobuso, a Inqanaba eliya kuthi lilungiselele ukutshintshwa kwesikrini. IFixit ikrokrela ukuba iApple isebenzisa iipaneli zokuthinta ezihlanganisiweyo zokudibanisa ukubamba kunye ne-OLED yomaleko womboniso, ukunciphisa iindleko, ubukhulu kunye nenani leentambo zokulawula ngaphakathi kwesixhobo.
Isiphoso kuyilo olutsha lwesixhobo kukuchonga ukungena kwamanzi kunye neprojektha yendawo ye-iPhone 13, edityaniswe kwimodyuli enye kwaye ivumele iApple ukunciphisa ubungakanani be Inotshi kwii-iPhones kulo nyaka. Ngale nto, benze i-ID yesixhobo sobuso esizimeleyo kwiscreen.
Ngokutsho kwe-iFixit, ngaphandle kokungalingani kwemodyuli ye-ID yobuso kunye nescreen, nakuphi na ukutshintshwa kwescreen kukhubaza i-ID yobuso. Oku kuthetha ukuba ukutshintshwa kwesikrini okungagunyaziswanga yiApple kuya kushiya izixhobo zethu ngaphandle kokuvula nge-ID yobuso. (vula okanye ungqinisise nayiphi na intshukumo ebandakanya ukubonwa kobuso).
Ngokumalunga nomthamo webhetri, i-iPhone 13 Pro isebenzisa i-11,97Wh, elingana ne-3.095mAh, xa kuthelekiswa ne-2.815mAh ye-iPhone 12 Pro. Ibhetri kwi-iPhone 13 Pro inoyilo olume ngo-L kulo nyaka, utshintsho olusuka kwibhetri yoxande esetyenziswe kwimodeli yePro yonyaka ophelileyo. I-iFixit ithi iimvavanyo zokutshintsha kwebhetri ziphumelele, ngaphandle kwamahemuhemu okuba ukubuyiselwa kwebhetri akunakwenzeka.
Ngaphakathi kukho i-6 GB ye-RAM, Kunye ne-Apple eyilelwe i-Ultra-wideband ebanzi kunye nolawulo lwetshipsi, kwaye ngokungathandabuzekiyo, i-iPhone 13 Pro ixhotyiswe ngemodem yeQualcomm's SDX60M kunye ne-iFixit ekholelwa ekubeni ngumdlulisi we5G. Umhlalutyi odumileyo, uMing-Chi Kuo, utshilo Imodem chip yeQualcomm kwi-iPhones yalo nyaka inokunxibelelana ngesathelayithi, kodwa ukuba ikho, i-iFixit ayibonanga kwaye i-Apple ayikhange iqalise unxibelelwano malunga nayo kwi-Keynote, ke kubonakala ngathi oku kusebenza kuye kwaba lilize. IBloomberg icacisile ukuba iApple isebenza kwinto yesatellite eya kuthi ivumele abantu ukuba bathumele izicatshulwa kwiimeko zongxamiseko besebenzisa uqhagamshelo lwesathelayithi, kodwa oku kusebenza akulindelwanga de kube ngu-2022.
Ukuba unomdla wokujonga kwakhona ukuphazamiseka kwe-iFixit ngokweenkcukacha ezithe kratya, siya kukushiya apha ikhonkco ukuze uyiqwalasele kwaye ufumane onke amalungu axhotyisa iflegi entsha yeApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » IFixit yahlula i-iPhone 13 Pro ngokumangalisa
Ukwanda okumangalisayo kwixabiso le-Beats Flex